Wɔn a Wɔdɔ Yehowa De, “Biribiara Nto Wɔn Hintidua” | Adesua
Wɔn a Wɔdɔ Yehowa De, “Biribiara Nto Wɔn Hintidua”
Wowɔ ‘Koma a Wode Behu’ Yehowa?
Afei a “Moabehu Onyankopɔn” Yi—Dɛn Bio?
Hyɛ Wo Ho Den na Hyɛ Afoforo Den
Yehowa Ne Yɛn Tenabea
Hyɛ Yehowa Din Kɛse no Anuonyam
Josephus Ankasa na Ɔkyerɛwee?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | March 2013
“Asomdwoe pii wɔ hɔ ma wɔn a wɔdɔ wo mmara, na biribiara nto wɔn hintidua.”—DW. 119:165.
Mmirika bɛn na Kristofo retu, na nkonimbo bɛn na ɛda hɔ retwɛn wɔn?
Nneɛma bɛn na ebetumi ato Kristoni hintidua?
Sɛ Bible ka sɛ, ‘wɔn a wɔdɔ Yehowa mmara de biribiara nto wɔn hintidua’ a, ɛkyerɛ dɛn?
1. Dɛn na mmirikatufo bi yɛe a ɛkyerɛ sɛ wamfa ahwease anyɛ nna?
BERE a Mary Decker fii ase tuu mmirika no, na osua. Eduu afe 1984 de, na ogyina ne nan so paa. Enti na obiara susuw sɛ ɛnyɛ dɛn ara a, saa afe no de obedi nkonim wɔ Olympik mmirika akansi no mu. Nanso bere a wɔde mmirika no hyehyɛɛ so no, obi twaree Mary ananmu ma ohintiw hwee ase. Wantumi antu saa mmirika no anwie, nanso wamfa ahwease anyɛ nna. Annu afe koraa na osii akan foforo dii nkonim. Mmirika a otui no, na ɔbea biara ntuu bi saa da wɔ wiase baabiara.
2. Mmirika bɛn na Kristofo retu? Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛde yɛ yɛn botae?
2 Kristofo nso retu mmirika bi; yɛretu daa nkwa ho mmirika. Yɛn botae ne sɛ yebetu mmirika no awie. Mmirika a yɛretu no nyɛ mmirika a yegyee bum ara na yɛawie. Saa ara nso na ɛnyɛ mmirika a yetu gogow yɛn ho. Mmom ɛyɛ mmirika a yetu twa kwantenten; egye animia na yɛatu awie. Ná Korinto yɛ kurow a agye din wɔ mmirika akansi mu. Enti bere a ɔsomafo Paulo rekyerɛw Korintofo no, ɔde Kristofo totoo mmirikatufo ho. Ɔkae sɛ: “Munnim sɛ mmirikatufo a wosi akan nyinaa tu mmirika no de, nanso obiako pɛ na onya nkonimbo no? Muntu mmirika no saa na mo nsa aka.”—1 Kor. 9:24.
3. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ obiara a obetu daa nkwa ho mmirika no awie no benya nkonimbo?
3 Bible ka kyerɛ yɛn sɛ yentu saa mmirika yi bi. (Monkenkan 1 Korintofo 9:25-27.) Nkonimbo no ne daa nkwa. Kristofo a wɔasra wɔn benya wɔn de wɔ soro na wɔn a wɔaka nso anya wɔn de wɔ asase so. Saa mmirikatu yi nte sɛ mmirika akansi a onipa biako pɛ na onya nkonimbo no. Eyi de, obiara a obemia n’ani atu awie no benya nkonimbo. (Mat. 24:13) Sɛ nkonimbo no bɛbɔ obi a, nea ɛkyerɛ ne sɛ wantu mmirika no sɛnea ɛho mmara te anaa wantu anwie. Saa mmirika yi nkutoo na sɛ obi tu a, onya daa nkwa.
4. Dɛn nti na daa nkwa ho mmirikatu no nna fam?
4 Ɛnyɛ mmerɛw sɛ yebetu mmirika no awie. Egye animia ne ahosodi. Yesu Kristo nkutoo ne obi a watumi atu mmirika no awie a wanhwe ase da. Nanso sɛnea Yesu suani Yakobo kyerɛwee no, Kristo akyidifo “nyinaa di mfomso mpɛn pii.” (Yak. 3:2) Eyi yɛ nokware turodoo! Yɛn ankasa sintɔ ne afoforo sintɔ di tia yɛn. Enti ɛtɔ da bi a ebia yebehintiw na yɛahwe ase. Ɛba saa a, ɛsɛ sɛ yɛsɔre na yɛtoa so tu mmirika no. Ebinom de, wɔn ahwease nyɛ ahwease ketewa, enti ehia sɛ obi boa wɔn ansa na wɔatumi asɔre atoa mmirika no so. Ebetumi aba sɛ yɛbɛhwe ase biako bi anaa yɛbɛhwe ase mpɛn pii.—1 Ahe. 8:46.
Sɛ wohwe ase a, ma obi mmoa wo na sɔre!
SƐ WOHWE ASE A, NNYAE MMIRIKA NO TU
5, 6. (a) Sɛ yɛka sɛ ‘biribiara nto Kristoni hintidua’ a, ɛkyerɛ dɛn? Sɛ Kristoni hwe ase a, dɛn na ɛbɛboa no ma ‘wasɔre’? (b) Dɛn nti na sɛ ebinom hwe ase a, wɔnsɔre?
5 Sɛ yɛhwe ase a, nea yɛbɛyɛ na ɛbɛkyerɛ nipa kõ a yɛyɛ. Ebinom hwe ase a, wonu wɔn ho, na wɔsɔre gyina wɔn nan so bio som Onyankopɔn. Ebinom nso de ahwease yɛ nna; wonnu wɔn ho mpo na wɔasɔre. Mmebusɛm 24:16 ka sɛ: “Sɛ ɔtreneeni hwe ase mpɛn ason mpo a, ɔbɛsɔre; na abɔnefo de, mmusu bɛma wɔahwe ase.”
6 Sɛ obi de ne ho to Yehowa so na biribi nti ɔhwe ase a, Yehowa renhwɛ mma ɔnka fam. Sɛ yedi mfomso anaa yehyia ɔhaw bi a, ɔbɛboa yɛn. Yɛwɔ awerɛhyem sɛ Yehowa bɛboa yɛn ma ‘yɛasɔre’ na yɛakɔ so asom no. Saa asɛm yi yɛ awerɛkyekye ma wɔn a wɔde wɔn koma nyinaa dɔ Yehowa. Abɔnefo de, wɔhwe ase a, wɔmpɛ sɛ wɔsɔre. Wɔnhaw wɔn ho nhwehwɛ Onyankopɔn honhom kronkron no na wɔpo mmoa a ne nkurɔfo de ma wɔn. Nanso wɔn a ‘wɔdɔ Yehowa mmara’ de, biribiara ntumi nto wɔn hintidua. Eyi kyerɛ sɛ wɔhwe ase mpo a, wɔsɔre toa so tu nkwa mmirika no.—Monkenkan Dwom 119:165.
7, 8. Sɛ obi “hwe ase” a, ɛbɛyɛ dɛn na wanya Onyankopɔn anim dom?
7 Ɛtɔ da bi a mmerɛwyɛ nti ebinom yɛ bɔne nketenkete bi. Ebia wɔbɛyɛ saa bɔne no mpɛn pii. Nanso sɛ ɛba saa na ‘wɔsɔre,’ kyerɛ sɛ wonu wɔn ho na wɔyere wɔn ho yɛ nea ɛteɛ a, Yehowa bebu wɔn treneefo. Saa na Onyankopɔn ne Israelfo no dii. (Yes. 41:9, 10) Ɛnyɛ yɛn ‘ahwease’ anaa yɛn mfomso na Mmebusɛm 24:16 si so dua, na mmom ɛma yehu sɛ mmɔborɔhunu Nyankopɔn no ayɛ krado sɛ ɔbɛboa yɛn ma ‘yɛasɔre.’ (Monkenkan Yesaia 55:7.) Yehowa Nyankopɔn ne Yesu Kristo wɔ yɛn mu ahotoso sɛ yɛbɛyɛ nea ɛteɛ, enti wɔhyɛ yɛn nkuran ma ‘yɛsɔre.’—Dw. 86:5; Yoh. 5:19.
8 Sɛ nnipa bi resi ammirikakane na sɛ obi hintiw hwe ase na ɔyɛ ntɛm sɔre a, obetumi atoa so atu mmirika no awie. Yennim ‘da ne dɔn’ a daa nkwa ho mmirika no bɛba awiei. (Mat. 24:36) Nanso yɛn de ara ne sɛ yɛbɛhwɛ yiye na yɛanhwe ase. Eyi bɛma ayɛ mmerɛw sɛ yɛbɛkɔ so atu mmirika no awie. Ɛnde, dɛn na yɛbɛyɛ na yɛanhwe ase?
NNEƐMA A EBETUMI ATO YƐN HINTIDUA
9. Nneɛma anum a ebetumi ato yɛn hintidua bɛn na yɛrebesusuw ho?
9 Momma yɛnhwɛ nneɛma anum a ebetumi ato yɛn hintidua: yɛn mmerɛwyɛ, ɔhonam akɔnnɔ, bere a yɛn nuanom Kristofo ne yɛn anni no yiye, ahohia anaa ɔtaa, ne afoforo sintɔ. Sɛ biribi ato yɛn hintidua anaa ama yɛahwe ase a, yɛnkae sɛ Yehowa wɔ yɛn ho abotare. Ɔrempere ne ho ntow yɛn nkyene.
10, 11. Mmerɛwyɛ bɛn na na Dawid wɔ?
10 Ade a edi kan a yebesusuw ho ne yɛn mmerɛwyɛ. Sɛ yɛretu mmirika a, mmoba betumi ayi yɛn ahwe fam. Yebetumi de mmoba a ɛte saa atoto yɛn mmerɛwyɛ ho. Sɛ yɛhwɛ Ɔhene Dawid ne ɔsomafo Petro asetena mu a, yehu mmerɛwyɛ a ɛte saa no bi. Dawid annya ahosodi, na na Petro nso suro nnipa anim.
11 Ɔhene Dawid ne Bat-Seba asɛm no ma yehu Dawid mmerɛwyɛ bi—ɛtɔ da a ontumi nhyɛ ne ho so. Bere a Nabal yeyaw Dawid no, ɛkaa dɛ anka ohwiee mogya gui. Ɛwom, ɛtɔ da bi a na Dawid ntumi nhyɛ ne ho so nanso wampa abaw; ɔkɔɔ so yɛɛ nea ɛsɔ Yehowa ani. Afoforo boaa no ma ogyinaa yiye.—1 Sam. 25:5-13, 32, 33; 2 Sam. 12:1-13.
12. Petro dii mfomso de, nanso dɛn na ɛboaa no ma ɔkɔɔ so tuu mmirika no?
12 Nnipa ho suro maa Petro yɛɛ nneɛma bi a ɛmfata, nanso ɔkɔɔ so bataa Yesu ne Yehowa ho. Bere bi ɔpaa ne Wura Yesu mprɛnsa. (Luka 22:54-62) Bere foforo nso, wanyɛ n’ade sɛ Kristoni. Obuu Yudafo Kristofo sɛ woye sen Amanaman mufo a wɔabɛyɛ Kristofo no. Ɔsomafo Paulo hui sɛ afoforo betumi asuasua Petro ma ɛde mpaapaemu aba asafo no mu, enti ɔkaa n’anim. (Gal. 2:11-14) Ɛnde, Petro bo befuw ma wagyae nkwa mmirikatu no anaa? Dabi. Ɔfaa Paulo afotu no aniberesɛm de yɛɛ adwuma na ɔkɔɔ so tuu mmirika no.
13. Ɔkwan bɛn so na yare betumi ato yɛn hintidua?
13 Ɛtɔ mmere bi a yare nso betumi ayɛ yɛn mmerɛwyɛ. Ɛno nso betumi ato yɛn hintidua. Ebetumi ama yɛagogow yɛn ho wɔ Yehowa som mu na yɛagyae mmirika no tu mpo. Nhwɛso bi ni: Onuawa bi a ɔwɔ Japan bɔɔ asu no, mfe 17 akyi na yare bi bɔɔ no. Daa na odwen ne yare no ho, na ɔyɛɛ mmerɛw wɔ Yehowa som mu. Akyiri yi ɔte tenae koraa; na ɔne anuanom mmɔ. Ɛbaa saa no, mpanyimfo baanu kɔsraa no. Nkɔmmɔ a wɔne no bɔe no hyɛɛ no nkuran ma ofii ase kɔɔ asafo nhyiam bio. Onuawa no kae sɛ: “Anuanom gyee me fɛw so ma ɛkaa me koma paa, na misui mpo.” Yɛn nuabea yi asan agyina ne nan so retu mmirika no.
14, 15. Sɛ akɔnnɔ bɔne sɔre yɛn mu a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ? Ma nhwɛso.
14 Honam akɔnnɔ ayi nnipa pii ahwe fam. Sɛ akɔnnɔ bɔne sɔre yɛn mu a, ɛsɛ sɛ yɛyɛ nea yebetumi biara na yɛn adwene, yɛn abrabɔ, ne yɛn som ho angu fĩ. Yesu kae sɛ, sɛ yɛn aniwa anaa yɛn nsa to yɛn hintidua a, ‘yɛntow nkyene.’ Ɛno kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yeyi nsusuwii anaa nneyɛe bɔne biara akwa na yɛatumi akɔ so atu mmirika no.—Monkenkan Mateo 5:29, 30.
15 Onua bi a wɔtetee no nokware no mu kae sɛ bere tenten ni, daa ɔne ne ho di asi. Ɛyɛ a ɔte nka sɛ ɔne ne yɔnko barima nkɔda. Ɔkae sɛ, sɛ ɔwɔ nnipa mu a, ne ho mmae no. Bere a odii mfe 20 no, na ɔyɛ daa kwampaefo ne asafo mu somfo. Nanso eduu baabi no, odii mfomso kɛse bi. Enti mpanyimfo no boaa no, na wɔde Kyerɛwnsɛm no teɛɛ no so. Onua no bɔɔ mpae suaa Onyankopɔn Asɛm Bible no. Afei nso ɔyeree ne ho yɛɛ asɛnka adwuma no de boaa afoforo. Eyinom nyinaa hyɛɛ no den ma ɔkɔɔ so tuu mmirika no. Mfe bi akyi no ɔkae sɛ: “Ɛwom ara a, saa akɔnnɔ no sɔre wɔ me mu, nanso minnyae me ho. Mahu sɛ Yehowa remma wɔnsɔ yɛn nhwɛ ntra nea yebetumi. Enti migye di sɛ Onyankopɔn nim sɛ metumi adi akɔnnɔ no so.” Onua no wiee n’asɛm no sɛ: “Wiase foforo no mu na mehu sɛ me brɛ anyɛ kwa. Saa bere no ara na meretwɛn. Seesei de, me ne me ho bedi asi kosi sɛ ɛbɛba.” Onua no asi ne bo sɛ ɔbɛkɔ so atu nkwa mmirika no.
16, 17. (a) Dɛn na ɛboaa onua bi a na ɔte nka sɛ afoforo ne no anni no yiye? (b) Sɛ yɛmpɛ sɛ biribiara to yɛn hintidua a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛkae?
16 Sɛ yɛn nuanom Kristofo ne yɛn anni no yiye a, ɛno nso betumi ato yɛn hintidua. Onua bi a kan no na ɔyɛ asafo mu panyin wɔ France kae sɛ anuanom ne no anni no yiye. Asɛm no yɛɛ no yaw paa. Enti ewiee ase no, ogyaee adesua ne asɛnka kɔ koraa. Mpanyimfo baanu kɔsraa no, na wɔyɛɛ aso tiee n’asɛm no nyinaa. Wɔhyɛɛ onua no nkuran sɛ ɔmfa n’adesoa nto Yehowa so, na wɔka kyerɛɛ no sɛ nea ehia paa ne sɛ ɔbɛyɛ nea ɛsɔ Onyankopɔn ani. Otiee afotu no guu aso pa mu, na ankyɛ koraa na ofii ase kekaa ne ho bio wɔ asafo no mu.
17 Ɛsɛ sɛ Kristofo nyinaa kae sɛ Yesu Kristo na Onyankopɔn apaw no sɛ asafo no Ti. Enti sɛ nnipa a wɔnyɛ pɛ yɛ yɛn biribi a, ɛnsɛ sɛ yɛma ɛka yɛn som. Yesu ani “te sɛ ogyaframa”; onim biribiara a ɛrekɔ so wɔ asafo no mu sen yɛn koraa. (Adi. 1:13-16) Ebia yebenya adwene sɛ biribi nkɔ yiye wɔ asafo no mu. Nanso ebia Yesu behu sɛ yɛn mmom na yɛante nneɛma ase yiye. Sɛ ehia sɛ Yesu siesie biribi wɔ asafo no mu a, onim ɔkwampa a ɔbɛfa so ayɛ saa ne bere a ɛfata sɛ ɔyɛ saa. Enti ɛnsɛ sɛ yɛma yɛn yɔnko Kristoni biara nneyɛe to yɛn hintidua ma yegyae mmirika no tu.
18. Sɛ ahohia anaa ɔtaa ba yɛn so a, yɛbɛyɛ dɛn agyina mu?
18 Nneɛma abien bi nso wɔ hɔ a ebetumi ato yɛn hintidua. Ɛno ne ahohia anaa ɔtaa, ne asafo no mufo sintɔ. Bere a Yesu de ogufo bi yɛɛ mfatoho no, ɔkae sɛ Onyankopɔn som nti sɛ “ahohia anaa ɔtaa” ba ebinom so a, ɛto wɔn hintidua. Nokware no nti, yebetumi ahyia ɔtaa afi yɛn abusuafo anaa yɛn afipamfo anaa atumfoɔ hɔ. Ɛba saa a, wɔn a ebetumi ahuan wɔn ase paa ne wɔn a ‘wonni ntini biara’ anaa wɔn ase ntim gyidi no mu. (Mat. 13:21) Nanso sɛ yɛde yɛn ho nyinaa bata Yehowa ho a, Ahenni aba no bɛboa yɛn ma yɛanya ntini na yɛatintim wɔ gyidi no mu. Sɛ amanehunu to yɛn a, ɛsɛ sɛ yedwinnwen nneɛma a “ɛsɛ ayeyi” ho. (Monkenkan Filipifo 4:6-9.) Yehowa bɛhyɛ yɛn den wɔ ahohia bere mu na biribiara anto yɛn hintidua.
Tu mmirika no; mma biribiara ntwe wo nsan!
19. Sɛ afoforo fom yɛn a, dɛn na yɛbɛyɛ na anto yɛn hintidua?
19 Awerɛhosɛm ne sɛ afoforo sintɔ nti, ebinom ate asan; wɔagyae nkwa ho mmirika no tu. Ɛtɔ da bi a onua bi ahonim bɛma no kwan ma wayɛ biribi, nanso yɛn ahonim remma yɛn kwan. Sɛ yɛanhwɛ yiye a, eyi bɛto yɛn hintidua. (1 Kor. 8:12, 13) Sɛ obi fom yɛn a, wohwɛ a, ɛbɛyɛ papa sɛ yɛfa nwansena ho abufuw bere yɛn kuru na yegyae nokware no? Bible tu yɛn fo sɛ ‘yennyae atɛn a yebu nkurɔfo’ na yɛmfa mfirifiri yɛn ho. Sɛ yesusuw sɛ yɛn asɛm yɛ dɛ mpo a, ɛnsɛ sɛ yɛtwe nsɛm mu tann. (Luka 6:37) Sɛ obi yɛ biribi ma ɛhaw wo a, bisa wo ho sɛ: ‘Nea me koma kyerɛ me na migyina so bu afoforo atɛn? Me nuanom sintɔ nti megyae nokware no?’ Sɛ yɛdɔ Yehowa paa a, ɛnde ɛsɛ sɛ yesuae wɔ yɛn komam sɛ yɛremma biribiara a nnipa bɛyɛ nto yɛn hintidua mma yemfi nkwa kwan no so.
MIA W’ANI TU MMIRIKA NO—MMA BIRIBIARA NTO WO HINTIDUA
20, 21. Dɛn na woasi wo bo sɛ wobɛyɛ wɔ nkwa mmirika no ho?
20 So woasi wo bo sɛ ‘wubetu mmirika no awie’? (2 Tim. 4:7, 8) Ɛnde, gye bere sua Bible ne asafo nhoma ahorow, yɛ nhwehwɛmu kɔ akyiri, na dwinnwen nea woresua no ho. Eyi bɛboa ma woahu nneɛma a ebetumi ato wo hintidua. Srɛ Yehowa ma ɔmfa ne honhom kronkron nhyɛ wo den. Kae sɛ, sɛ yɛwatiriw hwe ase a, yebetumi asɔre atu nkwa ho mmirika no awie. Sɛ yedi mfomso mpo a, yebetumi asua biribi afi mu de ahyɛ yɛn gyidi den.
21 Bible ma yehu sɛ, sɛ yɛpɛ daa nkwa a, ɛsɛ sɛ yɛde ahokeka tu mmirika no, na ɛnsɛ sɛ yɛgow yɛn ho anaa yɛte da. Ɛnyɛ kar bi na ɛbɛsoa yɛn ma yɛakogye nkonimbo no, na mmom yɛn ankasa na yebetu mmirika no. Bere a yɛretu mmirika no, Yehowa de “asomdwoe pii” bɛbɔ yɛn kyidɔm. (Dw. 119:165) Yɛwɔ awerɛhyem sɛ Yehowa bɛboa yɛn ma yɛakɔ so atu mmirika no nnɛ, na sɛ yetu wie a, ɔde nhyira a enni kabea adom yɛn.—Yak. 1:12.
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM March 2013